Iwo mashanu akaomesesa matanho e Super Mario Run | IPhone nhau
Iwo mashanu akaomesesa mazinga eSuper Mario Run
Alvaro Fuentes | | IPhone mitambo, dzakawanda
Super Mario Run anga ari pamusika kwenguva pfupi uye zvakadaro yatove inounganidza kushoropodzwa kwakawanda, kwese uye kupokana. Vamwe vanofunga kuti mutambo wacho hauna kukodzera iwo waunodhura uye kuti Nintendo iri kubva pakuipa ichienda pakuipisisa. Nepo kumwe kunetseka kuchinzwisiswa, ini ndiri muhombe Mario uye Nintendo fan. Ndanga ndichitamba mutambo zuva rega rega kubva zvabuda, kunyangwe ndichidzokorora akawanda mazinga kakawanda. Handikwanise kutaura kuti Super Mario Run yakaoma mune zvakawandisa, asi ndinoti mamwe matanho anogona kukonzeresa kushungurudzika kwevashandisi.
Mushure mekufunga uye kutarisa nedzimwe shamwari dzakatenga mutambo uyu, ngatitarisei matanho mashanu akaomesesa muSuper Mario Run. Iyi pfungwa ndeye kuzviisa pasi zvachose, saka sununguka kuverenga uye usiyane nezvandinonyora.
1 5. Chikamu 6–4: Bowser's Bob-ombing Mhanya
2 4. Chikamu 5 kusvika ku1: Kudzosera kwaLakitu
3 3. Chikamu che5 kusvika ku3: Boohind Lock uye Kiyi
4 2. Chikamu chechipiri kusvika ku2: Denga-Kumusoro Kusimudza uye Kusvetuka
5 1. Nhanho 6-3: Kuikanda Kwese Kwazvo
5. Chikamu 6–4: Bowser's Bob-ombing Mhanya
Ehe, iri ndiro danho rekupedzisira kwaunosvika pakukunda Bowser kamwe chete uye zvachose ... kusvikira aburitsa mumwe mutsva mutambo waMario, hongu. Chinoita kuti danho iri rive rakaomarara hausi mutambo wekutamba, inyaya yekuti pandakatanga ndakanga ndisingazive zvekuita uye fungidziro iyi yakagara kwenguva yakareba. Ndakagara kwechinguva ndichingonzvenga zvipingamupinyi zvaBowser uye ndichiedza kumhanyira kumagumo nguva isati yapera. Ini ndinofunga zvingave zvakanaka kutonhorera kana mushandisi akakwanisa kubata Bowser, kumubata uye kuve neimwe magumo yakapihwa… asi kwete. Panzvimbo iyoyo, iwe unofanirwa kudzosera bob-ombs iyo Bowser inokanda kuna Mario. Ita shuwa kuti unogara padanho rakaenzana repuratifomu seBowser kuitira kuti ugone kugadzirira kurwisa. Ukangoiwana katatu ... kwese kwese. Iyi nhanho yakanga isiri iyo yakaoma mushure mezvose, asi kusvika ipapo raive dambudziko chairo.
4. Chikamu 5 kusvika ku1: Kudzosera kwaLakitu
Lakitu zvirokwazvo anoshatirisa. Pamwe ndezvedu chete, asi kunyangwe kumashure mumazuva eSuper Mario Bros. kwaigara paine matambudziko naLakitu achikanda zvisikwa zvidiki zvakatsikwa sechinhu. Pamusoro peizvozvo, danho iri zvakare rine akati wandei anofamba mapuratifomu aunofanirwa kushandisa. Kazhinji zvaizove nyore, asi naMario achimhanya nespeed inomira, zvinonyanya kuoma kupfuura zvazvinonzwika.
Neraki, chikamu 5-1 chinopa mikana yakawanda yesimba renyeredzi, izvo zvinonyanya kuita kuti iwe usakundike kwechinguva kunze kwekunge wawa pamepu. Pasina izvozvo, Lakitu anoita dambudziko rakakura.
3. Chikamu che5 kusvika ku3: Boohind Lock uye Kiyi
Boo inowanikwa mumatanho akasiyana eSuper Mario Run, asi 5-3 yakasimba kune vamwe vese. Kwete chete iwe unofanirwa kuti utize kuburikidza nezvisinganzwisisike masuo, asi iwe unofanirwa kutsvaga makiyi ekupinda nawo. Izvi zvinogona kuve zviri pachena kana kuvanzwa, kunyangwe mukati meBoo iye. Zvakare, sekureba sekunge iwe uri munzira yakatarisana, Boo ichatanga kukudzingirira, izvo zvinoita kuti danho iri riome zvakanyanya.
Kwete yakawanda chiito pa5-3. Panzvimbo iyoyo, iro dambudziko rinouya kubva mukuedza kutora makiyi ese uye nekumhanyisa kuburikidza nemikova yese nenguva. Iyo 6-2 apo Boo anoita kuratidzika kwake kwekupedzisira kwaizove pane yepamusoro gumi runyorwa, asi iyo 10-5 inongonyanya kuodza moyo.
2. Chikamu chechipiri kusvika ku2: Denga-Kumusoro Kusimudza uye Kusvetuka
Iwe ungadai wakatarisira mazhinji emazinga akaomesesa pane ino runyorwa kuve mune epasi mashanu neshanu, sezvakangoitika kwandiri pandakatanga kutamba. Nekudaro, imwe chete yematanho aya yakandibhadharira kupfuura 2-2. Zvizhinji zvezvinoitika mu2-2 zvinosanganisira kusvetukira kumusoro nekukurumidza kusimuka uye kusimuka mapuratifomu, inoda kuti Mario asvetukire pane imwe chikuva. Handikwanise kutaura kana ndiri iye akaipa pane iri basa kana kana iri iyo fizikisi yemutambo kupomera, asi ndinofanira kunge ndadonha kune ino nhanho senge gumi nguva. Kuenda kumhara nenzira kwayo pamapuratifomu akaoma. Shamwari yangu yaivewo nezvichemo zvakafanana nezvedanho iri. Ndinovimba wakapihwa zvirinani.
1. Nhanho 6-3: Kuikanda Kwese Kwazvo
Isu takazosvika padanho rakaomesesa muSuper Mario Run. Inyika 6-3, yakanzi "Ikande Pasi Pose." Ini handikwanise kubuda muno ndisina kushandisa mabhuvhu angu ese kamwe kana kaviri. Vavengi vanogara vachikanda marara uye kusvetuka nguva dzese, zvichivaita zvinonetsa kupfuura. Zvekare kune akawanda madiki mapuratifomu kusvetuka kuenda nekudzoka. Kuwedzera kutuka mukukuvara, ane lousy baddie yekurwira pakupedzisira. Icho chikamu hachina kunyanya kuoma, asi chinowedzera kutuka kukuvara padanho iri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Iwo mashanu akaomesesa mazinga eSuper Mario Run
Iyo 2-2 inoita kunge isiri kunyanya kunetsa kwandiri, pamwe chinhu chakakurudzirwa munyika iyoyo kutamba naLuigi.
Pasina kusvika kuma2 ekupedzisira nyika, ini ndinoona nyika 4-1 yakaoma kwazvo padanho remari yegirini. Izvo zvakaoma chaizvo.
Qardio inopa QardioCore, bhendi yekutarisa moyo yedu inoenderana neIOS